प्रदेश २ उच्च जोखिममा, आठमध्ये धनुषा सहित छ जिल्ला ‘रेड जोन’मा,समस्या ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ र परीक्षण दर अत्यन्तै थोरै - Today Express
in Uncategorized, अन्तरवार्ता, अर्थ र वाणिज्य, कार्टून, जनकपुर विशेष, जीवनशैली, टिभी कार्यक्रम, ताजा समाचार, रेडियो कार्यक्रम, साहीत्य, सूचना प्रविधि, होमपेज
जनकपुरधाम । भदौ १६ गते । नेपालमा कोभिड–१९ को प्रकोप सुरु भएयता नै प्रदेश २ उच्च जोखिममा रहँदै आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सूचकहरूले समेत प्रदेश २ उच्च जोखिममा रहेको देखाउँछ । देशको कुनै एक भाग जोखिममा हुँदा राजधानीसहित अन्य भूभागसमेत जोखिममा पर्ने निश्चित हो ।
जोखिम दर्शाउने सूचकहरू मृत्युदर, सङ्क्रमण दरले प्रदेश २ को अवस्थालाई चित्रण गरेको छ । मन्त्रालयले प्रदेश २ मा कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरण गर्न साउन दोस्रो साता तीन सदस्यीय टोली नै गठन गरेर स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदेश दिएको थियो । जसबमोजिम स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्र रमण सिंह नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदेश २ को स्थिति सुधार गर्न आवश्यक उपाय अपनाउन सुरु गरेको छ । तर जोखिम र सूचक भने सुधार भएको देखिन्न । जनस्वास्थ्य विज्ञ भन्छन् – कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार र नागरिक स्वयंको असंवेदनशीलताले प्रदेश २ को अवस्था अझै कमजोर हुने देखिन्छ ।
प्रति एक सय जनामध्ये २१ जना महोत्तरीमा र ११ जना पर्सामा सङ्क्रमित थपिँदासमेत परीक्षणदर अत्यन्तै थोरै देखिन्छ । जसले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण समुदाय स्तरमै फैलिएको दाबीलाई बल दिन्छ ।
प्रदेश २ मा कोभिड–१९ को जोखिम उच्च हुनुको कारण खुला सीमा, परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा लापरवाही तथा कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार रहेको जनस्वास्थ्यविद् डा। रविन्द्र पाण्डे बताउनुहुन्छ ।
प्रदेश २ का अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । तर कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो छ । जसले सङ्क्रमण समुदायमा अझै बढी फैलिने सम्भावना बढ्दो छ ।सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विजयकुमार झाले निषेधाज्ञाकै बेला कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी नभएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश २ मातहातको सबै स्थानीय तहलाई ट्रेसिङको लागि प्रशिक्षण दिइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
करिब ६० लाख जनसङ्ख्या रहेको प्रदेश २ मा दुई दिनअघिसम्म मात्र चार वटा पीसीआर उपकरण थियो । वर्षको सुरुवातमै प्रकोपको रुप लिइरहँदा प्रदेश २ सरकारले पीसीआर उपकरण, भेन्टिलेटरको लागि खुला गरेको टेण्डरको छिनोफानो भएन । र अझै प्रदेश सरकारमा कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न स्पष्ट नीतिको अभाव देखिन्छ ।
प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयक वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत विजयकुमार झाले १५ दिनभित्र प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा एउटा एउटा पीसीआर उपकरण राख्ने तयारी गरिएको बताउनुहुन्छ । बर्दिबास नगरपालिकाले आफ्नै स्रोत साधनले पीसीआर उपकरण खरिद गरेको छ । र स्वाब सङ्कलन सुरु गरिसकेको छ ।जिल्ला अस्पताल, जलेश्वरमा दुई साताअघि नै भेन्टिलेटर जडान गरियो । तर जनशक्ति अभावमा एक सातासम्म उक्त वार्ड सञ्चालनमा आएन ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सामान्य मापदण्डबमोजिम एक जना सङ्क्रमित फेला पर्दा कम्तीमा ३० जनालाई परीक्षण गरिनुपर्छ । यसरी १० हजार २२ जना सङ्क्रमित फेला परेको प्रदेश २ मा हालसम्म कम्तिमा तीन लाख व्यक्तिको आरटी पीसीआर परीक्षण हुनुपर्ने हो । तर अझै एक लाख पनि परीक्षण भएको छैन । त्यसो त देशभरि नै परीक्षण दर कम देखिन्छ । सङ्क्रमित फेला परेको आधारमा परीक्षण नबढाइएको अवस्थामा सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका सबैलाई परीक्षणको दायरामा ल्याइनु आवश्यक रहेको अर्का जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तको सुझाव छ । तर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङसमेत प्रभावकारी रुपमा गरिएको देखिएको छैन ।
समुदायमा कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी अलग्याउनु नै जोखिम कम गर्नुको उपाय रहेको डा. वन्त थप्नुहुन्छ । परीक्षण बढाउनका लागि आरटी पीसीआर उपकरणको सङ्ख्या जिम्मेवार हुन्छ । कोभिड–१९ को उच्च जोखिममा परेको प्रदेश २ मा पीसीआर उपकरण सीमित छ ।
हालसम्म चार वटा पीसीआर उपकरणबाट परीक्षण हुँदैआएको छ । वीरगञ्जमा दुई, सप्तरीको राजविराज र जनकपुरधाममा एक गरी चार वटा प्रयोगशाला छन् । बर्दिबासमा समेत परीक्षण सुरु गरिएको छ ।
प्रदेश २ को स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विजयकुमार झाले १५ दिनभित्र छ वटै जिल्लाको जिल्ला अस्पतालसहित निर्देशनालय र वीरगञ्जमा थप पीसीआर उपकरण जडानको तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“परीक्षण बढाउने, सीमा क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर बनाएर क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित बनाउने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रुपमा जिम्मेवार बनाउने र कोभिड–१९ अस्पताललाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाएपछि नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ ।” झाले बताउनुभयो । यी चार वटै कार्य सञ्चालनको लागि प्रदेशले आवश्यक पहल र काम गरिरहेको उहाँको दाबी छ ।
मृत्युदर र सङ्क्रमण दर वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, उपचार पद्धति र विज्ञ जनशक्ति उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको जनस्वास्थ्य प्रशासक झाले बताउनुभयो ।
उच्च स्तरीय विज्ञको टोलीले दिएको सुझावको आधारमा प्रदेश २ मा कोभिड–१९ नियन्त्रणका प्रयास सुरु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रलायका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम भन्नुहुन्छ . डा. गौतमले विज्ञ समितिको सुझावको आधारमा प्रदेश २ मा २५ जना विशेषज्ञ विज्ञलाई पठाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले माग र आवश्यकताको आधारमा मन्त्रालय सहयोग गर्न तत्पर र तयार रहेको बताउनुभयो ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. पाण्डेले झाको अपेक्षामा सहमति जनाउनुहुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रलायले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी प्रदेश २ को अस्पताल, चिकित्सकलाई सुझाव र सहयोग गर्नुपर्ने धारणा उहाँको हो ।
समुदायले सरकारको स्वास्थ्य प्रोटोकललाई अनिवार्य मान्नुपर्ने, मन्त्रालयले उपचार पद्धति, विज्ञ व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्ने र अस्पतालमा सेवा दिने चिकित्सक बिरामीको उपचारमा समर्पित भए प्रदेश २ ले सङ्घर्षसहित आगामी दिनको सामना गर्ने हैसियतमा पुग्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. पाण्डेले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अझै जिल्लागत् रुपमा हेर्दा सङ्क्रमणको आधारमा प्रदेश २ को महोत्तरीको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक देखिन्छ । महोत्तरीमा हालसम्म पाँच हजार ८०८ जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा एक हजार २३६ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ । अर्थात सङ्क्रमण दर करिब २१ प्रतिशत हो । प्रति सय जनाको परीक्षण गर्दा २१ जना सङ्क्रमित फेला परेका छन् । वीरगञ्जमा हालसम्म १८ हजार ५५७ जनाको परीक्षण गर्दा दुई हजार १६७ जना सङ्क्रमित फेला परेका छन् । सङ्क्रमण दर ११.६७ प्रतिशत हो ।
सिरहामा ठगी धन्दा चलाउँदै आएका शिवजीलाई कारबाही नगरे आन्दोलनमा जाने दलित संघर्ष समितिको चेतावनी,”सिडियो मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाए”
सिरहामा ठगी धन्दा चलाउँदै आएका शिवजीलाई कारबाही नगरे आन्दोलनमा जाने दलित संघर्ष समितिको चेतावनी,"सिडियो मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाए"